Udlame olwenzeka e-KZN luyinsila yohulumeni wobandlululo | News24
Udlame olwenzeka e-KZN luyinsila yohulumeni wobandlululo
Durban - I-African National Congress (ANC) KwaZulu-Natal itshele ikhomishana kaMoerane ukuthi udlame olukhona eNingizimu Afrika luyinto eyenziwa ngamabomu nguhulumeni wobandlululo.
Le nhlangano yethula ubufakazi ngaphambi kwale khomishana ephenya mayelana nezigameko zokubulala okuhlobene nezepolitiki kulesi sifundazwe.
Izithunywa ze-ANC e-KZN, eziholwa nguSihle Zikalala zichithe usuku lwangoLwesine zikhuluma ngomlando wengcindezelo kanye nobandlululo eNingizimu Afrika nokuthi le mibuso yawutshala kanjani umkhuba wodlame ezweni.
OLUNYE UDABA: 'Lalisohlwini labazobulawa igama likaMagaqa'
UZikalala uthe ziningi izinto eziyizinsalela zomlando wethu ezisenzeka kodwa namanje emiphakathi, wanezezela ngokuthi ukubulalana kwakamuva kubeka obala ukuthi kunempi ekhona ngombango wezinsiza zomnotho, ubugebengu, ukulahleka konembeza kanye nokungabekezelelani kwezombusazwe.
Yingenxa yalezi zizathu uZikalala ethi lokhu kubulalana okukhona kuyingxenye yenkinga enkulu umphakathi obhekene nayo.
Nokho, uZikalala uyavuma ukuthi izinkabi nazo ziyanezezela kulesi sihlava sodlame esikhona e-KZN.
Kule khomishana kuleli sonto kuvele ukuthi igama likalowo owayenguNobhala we-African National Congress Youth League owabulawa, uSindiso Magaqa, lalisohlwini labazobulawa, kanye namagama abanye abaholi abahlanu eMzimkhulu, eningizimu yeKwaZulu-Natal.